Waan jeclahay jirkan. Haweenay ku dhalatay addimmo la’aan ayaa sheegtay in aysan ku qancin karin nolosheeda iyo muuqaalkeeda - TELES RELAY
ACCUEIL » DARYEELKA CAAFIMAAD "Waan jeclahay jidhkan." Haweeney ku dhalatay addimmo la'aan ayaa sheegtay inaysan ku farxi karin nolosheeda iyo muuqaalkeeda
Waan jeclahay jirkan
Maaha qaladka qofkasta haddii qofku ku dhasho naafo. Si kastaba ha noqotee, adduunkan waxaa loo diyaariyey hab dadka naafada ah ay had iyo jeer dareemaan inay liitaan ama ay ku dhaawacmaan muuqaalkooda.
Ku dhaji Raacista Chassidy (@chasing_chassidy) on May 20, 2019 at 11: 23am Magaadle
Si kastaba ha noqotee, dadka qaarkiis waxay ku guuleysteen inay ka adkaadaan fikradaha noocaan ah oo ay noloshooda si buuxda ugu noolaadaan. Chassidy Young, oo ku dhashay cudurka 'tetra-amelie syndrome', waa hal tusaale.
Waa maxay cudurka loo yaqaan 'tetra-amelie syndrome'?
Waxa kale oo loo yaqaanaa tetra-amelic Automatom recessive tetra-amelia, xaaladdani waa cillad naadir ah oo ku dhasha oo lagu garto maqnaanshaha dhammaan afarta addin.
Ku dhaji Raacista Chassidy (@chasing_chassidy) on Jan 27, 2019 at 11: 02pm PST
Cudurkan hidde-wadaha waxaa sababa isbedelada hiddo-wil WNT3 iyo aagagga kale ee jirka ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay.
Fadeexad: dhalasho kala duwan
Haddii qof u qalmo inuu naftiisa necbaado, waxay ahayd Chassidy Young maxaa yeelay gabadha yari waxay ku dhalatay iyada oo aan afarteeda xubnood lahayn. Si kastaba ha noqotee, waxay tiri waxay ku nooshahay nolosha ugufiican!
Ku dhaji Raacista Chassidy (@chasing_chassidy) on Oct 21, 2018 at 11: 36pm PDT
"Ma aqaano waxa aan sameeyo haddii aan tooso berri, jir caadi ah oo gacmaha is haysta - runtii si daacad ah ayaan ugu kalsoonahay nafsadeyda."
In kasta oo ay xaaladdeeda jirto, Chassidy waxay sheegtay in ay aad ugu qanacsan tahay jirkeeda laakiin gabadha da 'yar ee 32 sano waxay qiratay in koritaanka aysan ahayn khibrad raaxo leh maxaa yeelay had iyo jeer waa lagu jees jeesi jiray xaaladdeeda darteed.
Ku dhaji Raacista Chassidy (@chasing_chassidy) on Oct 2, 2017 at 3: 46pm PDT
Waxay sheegtay in fasalka lixaad, ay ka mid ahayd koox qoob-ka-ciyaaraya oo ay ka qaybgashay tartan. Si kastaba ha noqotee, inkasta oo Chassidy ay ogtahay tirada, haddana looma oggola inay raaciso sababtoo ah waxaa loo maleynayay inaysan awoodin inay sameyso.
Waxay xasuusataa oohintii maalintaas oo ay ogaatay inay ka duwan tahay.
Ku dhaji Raacista Chassidy (@chasing_chassidy) on Aug 29, 2017 at 7: 25pm PDT
Nasiib wanaagse, iyada oo u mahadcelinaysa qoyskeeda, khibraddan qadhaadh ee aan xumaynayn isku-kalsoonida gabadha yar ee ay markaas ahayd. Qoyskeedu waligood si gaar ah ulama dhaqmin waxayna ku qasbeen inay ku lug lahaato geedi socodka caruurnimada si la mid ah qofkasta oo kale.
Waxay ilaalinaysay shaqada guriga, waxay tagtaa markasta oo ay rabto, gabi ahaanba waxkastana way samaysaa.
In kasta oo Cassidy ay ku raaxaysanayso madax-bannaanideeda, haddana wax kasta kaligeed ma qaban karto. Halkani waa meesha ay walaasheed Ashley iyo saaxiibkeed muddada dheer soo galaan Candace.
Ku dhaji Raacista Chassidy (@chasing_chassidy) on Jul 25, 2019 at 7: 47pm PDT
Chassidy waa qof dhiirigeliya oo ku hadla dadka naafada ah kana caawiya inay naftooda wanaagsanaadaan.
Adoo ka hadlaya Barcroft TVWaxay tiri:
Waxaan leeyahay jirkan; Waan jeclahay jidhkan waanan aqbalayaa jidhkan - taasi waa waxa aan ahay oo anigu dan kama galo cidda jecel ama jeclaata sababta oo ah aniga ayaa igu habboon.
Ku dhaji Raacista Chassidy (@chasing_chassidy) on May 31, 2019 at 5: 59am Magaadle
Marka haweeneydu is jeclaato, qof walbaa wuu ixtiraamayaa
Sawirada Chassidy ee barta Instagram waxay ka helaan faallooyin badan oo wanaagsan dadka isticmaala internetka ee arkay quruxdeeda iyo kalsoonidooda.
@lolooo3222332 ayaa qoray:
"Waxaad leedahay dhoola cadeyn qurux badan oo qurux badan."
Ku dhaji Raacista Chassidy (@chasing_chassidy) on Apr 5, 2019 at 11: 23am PDT
@allaboutthatjase, xamaasad leh:
"Runtii waad yaab badan tahay, qurux badan oo qurux badan."
Ku dhaji Raacista Chassidy (@chasing_chassidy) on Feb 19, 2019 at 11: 09am PST
In kasta oo ay xaaladdeeda tahay, Chassidy waxay ogtahay qiimeheeda shaqsiyeed, taas oo ka dhigaysa haweeney cajiib ah! Iyadu waa dhiirrigelin dhammaanteen!
Cunugga dhagoolaha ah wuxuu dhashaa hooyadiis oo leh "Waan ku jeclahay" waqtiga 1ere ka dib meelaynta maqalka ee maqalka